Xirfadlayaasha Shiinaha ee macaan ee macaan ee jilicsan ee Silicone Shukulaatada loo yaqaan Soosaarista Sameeyaha iyo keeniyaha Shukulaatada | Jingqi
Mashiinka Shukulaatada, Jumbaha Barafka Cube
Robot qaabeeya miis hilibka shukulaatada Silicone shukulaatada oo leh 12 dalool
Miyaa saxannada barafka leh ee silicone lagu dhex geli karaa weelka dhaqa?
Kuwani saxannada barafka ee silikoonku waa mid weel kar ah, sidaa awgeed si fudud ayaad u isticmaali kartaa mar labaad iyo mar labaad. Kaliya ku tuur tuubbada dusha sare kuna dhaq suxuunta sidii caadiga ahayd.
Magaca badeecada Robot qaabeeya miis hilibka shukulaatada Silicone shukulaatada oo leh 12 dalool
Waxyaabaha FDA silicone
Isticmaalka Caaryada shukulaatada, saxan baraf ah
xirmo 5pcs / opp bag
cabir: 21.5 * 10.8 * 1.8cm
culeys 52g / pc
Malaha! Silicone kuma jiraan wax BPA ah, sidaa darteed waad ku wanaagsan tahay dhinacaas haddii aad dooratid saxanka barafka silicone inuu beddelo caag ah. In kasta oo caaggu yahay nooc ka sameysan polymer, silikone waa resin dabacsan oo lagu sameeyay silica - oo si fiican loogu yaqaanno ciid illaa celceliska xeebta junkie. Saxannada barafka ee silikone waa jilicsan yihiin oo la ruqseyn karo, umana muuqdaan inay kimikal ku ridayaan cuntada ama biyaha heerkulka qabow. In kasta oo ay jiraan warbixino ku kala firidhsan oo ku saabsan macdanta "silicone" ku dhex darsamaysa cuntooyinka heerkul aad u sarreeya - waxaad u maleyneysaa saxanka dubista iyo wasakhaha muuska - tani waa mid aan la wada koobi karin, isla markaana wax saameyn ah kuma yeelan doonto howlahaaga barafka sameynta ugu yar. Hadday tahay BPA waxaad ka walwalaysaa, silsiladaha ciriifka barafka leh waa ka nabad badan kuwa ka caagga ah.
Ma Ubaahanyahay Raadinta BPA-yada Silicone Trays?
Dhammaan silikonku waa bilaa-bilaash-BPA, sidaa daraadeed nooca noocan ahi waxay la mid tahay sumaynta sonkorta miiska inay ka madax-bannaan tahay. Sure, waa run, laakiin ma ahan sida ay u gaar tahay ama si uun uga duwan tahay xulashooyinka kale ee la midka ah sababta oo ah magacaabidaas.
Balaastikada BPA-ka bilaashka ah, dhinaca kale, waa waxoogaa gaar ah. Plastikyo badan oo adag ayaa ku jira maadada, sidaa darteed raadinta alaabooyin leh shati la'aan BPA waa hab fiican oo aad naftaada iyo qoyskaagaba ka ilaalinayso in kiimikooyin dheeri ah ay ku soo galaan cuntadaada.
caaryada shukulaatada ee silikon
Dheemanka Jumbo Dheeman Silicone Barafka Mawjadaha Cunnada ...
BPA Free Free Shaaha FDA heerka Silicone Shaaha infus ...
Weelasha Cubeysaska Barafka ee Silicone Ice, Baraf shaqsiyeed ...
Midabada Madoow ee 29ML ee Saliida Dheecaanka leh ee Saliida leh oo leh PP ...
FDA Silicone spatula waxay ku dhejisaa gacmo caag ah ...